အမျိုးသားတိုင်း ပိုင်ဆိုင်ထားသင့်တဲ့ အိတ်အမျိုးအစား ၆ မျိုး | သစ်ထူးလွင် (ဗဟုသုတ နှင့် ထူးဆန်းထွေလာ)
Home / featured / အမျိုးသားတိုင်း ပိုင်ဆိုင်ထားသင့်တဲ့ အိတ်အမျိုးအစား ၆ မျိုး
အမျိုးသားတိုင်း ပိုင်ဆိုင်ထားသင့်တဲ့ အိတ်အမျိုးအစား ၆ မျိုး
Staff Writer 11:30 featured Edit
လေးလံတဲ့ ပိုက်ဆံအိတ်တွေနဲ့ အိတွဲကျနေတဲ့ အင်္ကျီအိတ်ကပ်တွေ ၀တ်ဆင်ကိုင်ဆောင်ရတဲ့ ခေတ်တွေကုန်ဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ။ ကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေက မိန်းကလေးတွေအတွက်ချည်းပဲ မဟုတ်ပါဘူး။ ယောကျာ်းလေးတွေအတွက်လည်း အိတ်တွေဟာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ အရာတွေဖြစ်လာပါပြီ။ ဒါပေမယ့် အရေးအကြီးဆုံးကတော့ သင့်ကိုကြည့်ကောင်းနေစေပြီး ပစ္စည်းအားလုံးကို သယ်ဆောင်သွားနိုင်စေဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဆိုရင် ယောကျာ်းလေးတိုင်းအတွက် ပြည့်စုံလိုက်ဖက်တဲ့ အိတ်ပုံစံဘယ်လိုမျိုးတွေလဲ? နေရာအချိန်မရွေး လိုက်ဖက်မယ့် အိတ်ပုံစံတွေကို ရွေးချယ်ပြသပေးထားပါတယ်။
၁။ ပိတ်ရက်ခရီးထွက်ရန် အိတ်
နာမည်ပေးထားတဲ့အတိုင်းပါပဲ၊ ရုံးပိတ်ရက်အားလပ်ရက်တွေမှာ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူတဲ့ အိတ်အမျိုးအစားလေးဖြစ်ပါတယ်။ စတိုင်လည်းကျပြီး ဗီဒိုထဲကလိုအပ်သမျှပစ္စည်းတွေကို သယ်ဆောင်သွားနိုင်တဲ့ အိတ်ဖြစ်ပါတယ်။
၂။ သားရေအပျော့သား အိတ်
တည်ကြည်ခန့်ညားတဲ့ အမျိုးသားတွေအားလုံးအတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွဲဖက်လုပ်ကိုင်သူတွေနဲ့ တွေ့တဲ့အခါ၊ ကိုယ့်ရဲ့ သူဌေးနဲ့ နေ့လည်စာ ထွက်စားတဲ့အခါ သင့်အနေနဲ့ သားရေအိတ်တစ်လုံးဟာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အားကစားလုပ်တဲ့အခါ ၀တ်ဆင်သမျှအားကစားဝတ်စုံတွေ ထည့်သွင်းသယ်ဆောင် သွားရလေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်ရှိပြီး တောင့်တင်းခိုင်မာတဲ့ သင့်ရဲ့ကြွက်သားတွေ လိုက်ဖက်ပြီး ပိုမိုပေါ်လွင်အောင် ဖန်တီးပေးနိင်မယ့် အိတ်အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။
လူတိုင်း အမြဲလိုလို အကြိုက်တွေ့ကြတဲ့ အိတ်တွေထဲမှာ ကျောင်းလွယ်အိတ်ပုံစံတွေလည်း ပါပါတယ်။ မြို့ထဲမှာ လျှောက်သွားတဲ့အခါ ကော်ဖီခွက်နဲ့ မုန့်လေးတွေလည်း သယ်ဆောင်သွားလို့ရတဲ့ အိတ်ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်။
ဒါက ကျောင်းလွယ်အိတ်နဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ကွဲပြားတာက အိတ်အရှေ့ဘက်မှာ အိတ်ဖုံးအကြီးကြီးပါတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး သွားလာတဲ့အခါ သယ်ဆာင်သွားနိုင်ပြီး
နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ ကျောပိုးအိတ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စနီကာဖိနပ် အလန်းစားနဲ့ လိုက်ဖက်တာကတော့ ကျောပိုးအိတ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စာအုပ်တွေလည်း ထည့်ပြီး သယ်ဆောင်သွားနိုင်ပါတယ်။ လမ်းလျှောက်ထွက်တဲ့အခါမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အမိုက်စားကျော်ပိုးအိတ်တစ်လုံးကို ရွေးချယ်ဝယ်ထားပြီးပြီဆိုရင်တော့ လူတွေကြားထဲမှာ စတိုင်ကျပေါ်လွင်နေမှာ အသေအချာပါပဲ။
Ref : Menxp
သစ်ထူးလွင် ဗဟုသုတဆိုဒ်သည် မြန်မာနှင့် ကမ္ဘာအရပ်ရပ် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ သတင်းများ၊ အဖြစ်အပျက်များနှင့် မှတ်သားဖွယ်ရာ၊ ဗဟုသုတရဖွယ်ရာ သတင်းများကို အချိန်နှင့် တပြေးညီ ဖေါ်ပြပေးသည့် ဆိုဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကဏ္ဍတွင် စိတ်ပါဝင်စားသဖြင့် ဆောင်းပါးရေးသားချင်သူများ ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်
တိရစ္ဆာန်ခေါင်းပုံစံ အစစ်တွေလို့ထင်ရတဲ့ ဂျပန်ပညာရှင်ရဲ့ လက်ရာမြောက် ခေါင်းစွပ်မျက်နှာဖုံးတွေ
ဂျပန်နိုင်ငံက Kamonohashizokei (Platypus Modeling) ဖန်တီးထားတဲ့ ခေါင်းစွပ်မျက်နှာဖုံးတွေကိုတော့ တွေ့တဲ့သူတိုင်းက ဝတ်ဆင်သွားချင်မယ့် ဆန္ဒ...
အနက်ရောင်မကြိုက်လို့ နိုင်ငံတွင်းမှာ အနက်ရောင်ကားတွေ ပေးမစီးတော့တဲ့ တာ့ခ်မင်နစ္စတန်သမ္မတ
၂၀၁၈ မှာတော့ တာ့ခ်မင်နစ္စတန်နိုင်ငံမှာ ကားအနက်ရောင်တွေကို တွေ့မြင်ရဖွယ်မရှိတော့ပါဘူး။ အက်ရ်ှဂါဘတ်မြို့မှာတော့ အနက်ရောင်ကားတွေကို တားမြစ...
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းဖြေဆိုထားသူများအတွက် SQA မှချီးမြှင့်သော Higher National Diploma - HND in Business ကို NIC စတင်မိတ်ဆက်
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းဖြေဆိုထားသူ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအတွက် ရည်ရွယ်၍ Higher National Diploma ပညာရေးအစီအစဉ်ကို Nanyeng International College...
Executive Master in Leadership, Strategy & Innovation အတွက် Study Grant များရရှိနိုင်
သြစတြေးလျတက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်သည့် Murdoch University, Australia မှပေးအပ်ချီးမြှင့်သောExecutive Master in Leadership, Strategy & Innova...
မန်မာငွေ သိန်း ၁၈၀၀ ကျော်တန် ကမ္ဘာ့ဈေးအကြီးဆုံး ခွေးအကျီ င်္
သင့်အနေနဲ့ အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ ခွေးကို ဘယ်လောက်ချစ်ပါသလဲ??? ဒီမေးခွန်းကို အကောင်းဆုံးဖြေနိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့ ဒီခွေးအကျီ င်္ကို ဝယ်ဝတ်ပေးလို...
ဗြိတိန်နိုင်ငံ က အမျိုးသမီးတွေ ၅ ယောက်မှာ ၄ ယောက်ဟာ နေ့စဉ် ရေမချိုးကြ
ထူးဆန်းတဲ့ လေ့လာမှု တစ်ခုအရ အမျိုးသမီးတွေ ဟာ ၅ ယောက်မှာ ၄ ယောက် ဟာ နေ့ စဉ် ရေမ ချိုး ကြ ဘူး လို့ သိရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာ ရှိ...
၀တ်လစ်စလစ် နဲ့ ၀ီစကီ ပုလင်း ဖင်ခုထိုင်ပြီး ကားမောင်းခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီး အဖမ်းခံရ
ရဲဝန်ထမ်းတစ်ဦးဟာ ယာဉ်တိုက်မှုတစ်ခုကနေ သူမထင်မှတ်ထားတဲ့ အရာတွေကို ယာဉ်မောင်း ပြတင်းပေါက် ကနေ တစ်ဆင့် တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတေ...
မြန်မာငွေ သိန်း ၁၅၀ ဝန်းကျင် တန်ဖိုးရှိတဲ့ စမတ် toilet
ကိုယ့်အိမ်က ရေချိုးခန်းတွေ ၊ အိမ်သာတွေဆိုတာ နည်းပညာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အဆောင်အယောင်တွေ အကင်းမဲ့ဆုံးနေရာတစ်ခုလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒီလိုနေရာကို ...
ခန္ဒာကိုယ်တစ်ခုလုံး မှင်အပြည့် တက်တူးထိုးထားတဲ့အမျိုးသားရဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ စတိုင်လ်
Adam Curlykale လို့အမည်ရတဲ့ အမျိုးသားတစ်ယောက်ကတော့ သူ့ရဲ့ အင်စတာဂရမ်မှာ ထူးခြားတဲ့ စတိုင်လ်ကြောင့် နာမည်ကြီးလျက်ရှိနေပါတယ်။ အသက် ၃၂ နှစ...
အခေါင်းထဲကနေ အော်ဟစ်နိုးထလာပြီးနောက် နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်သေဆုံးသွားတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်
အသုဘလာတဲ့သူတွေဟာ ကွန်ကရစ်အုတ်ဂူကို ကမန်းကတန်း ဖြိုဖျက်ပြီး အခေါင်းထဲက သေဆုံးပြီးသား ဆယ်ကျော်သက်ကို ပြန်လည်ကယ်ဆယ်ခဲ့ရပါတယ်။ သေဆုံးသူ Ms...
Copyright © 2014 သစ်ထူးလွင် (ဗဟုသုတ နှင့် ထူးဆန်းထွေလာ)